Areti-nify : miankina amin’ny fanjarian-tsakafo ny fahasalaman’ny ativava - Informations et Actualités sur Madagascar
Santé Areti-nify : miankina amin’ny fanjarian-tsakafo ny fahasalaman’ny ativava
Areti-nify : miankina amin’ny fanjarian-tsakafo ny fahasalaman’ny ativava
by Alpha world on 11 h 11 in Santé
Nanomboka ny talata teo, ny « Herinandro natokana ho an’ny fahasalaman’ny nify sy ny ativava ». Tetsy amin’ny CDA Andohatapenaka no anatanterahana izany ho an’ny eto Antananarivo.
Tsikaritry ny mpitsabo nify fa mifampiankina betsaka ny fanjarian-tsakafo sy ny fahasalaman’ny nify sy ny ativava. Potika ny nifin’ny ankamaroan’ny ankizy tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo. Miteraka aretina betsaka ao anatin’ny vatana anefa ny aretin’ny nify. Voalohany amin’izany ny aretin’ny fandevonan-kanina.
Rehefa misy mikraoba ao amin’ny nify marary, mety hanaraka ny lalan-kanina izany ka ho tonga ao amin’ny vavony. Indraindray, tonga any amin’ny tsinay sy ny aty mihitsy aza. Mety hiakatra any amin’ny loha ihany koa ny mikraoba ka tena mila mitandrina.
Mba hisorohana ireo karazan’aretina ireo, araka izany, tokony ho salama tsara ny nify sy ny ativava. Tokony hanao fizahana indroa isan-taona any amin’ny mpitsabo nify ny ankizy na olon-dehibe iray. Mila misakafo ara-pahasalamana tsara ihany koa. Mahasalama ny nify ny fihinanana sakafo be vitamina, proteina ary sokay.
Ankoatra izany, tsy tokony hatao ambanin-javatra ny fikarakarana ny nify isan’andro. Mila miborosy nify rehefa avy misakafo mba tsy hanangona ny mikraoba ao anaty vava. Fadina ihany koa ny mihinana mamy matetika mba tsy hanapotika ny nify.
Raha ny salanisa, manodidina ny 8.000 ireo ankizy latsaky ny 15 taona notsaboina nify teto Antananarivo tao anatin’ny telo volana. Niisa 20.000 kosa ireo tanora nandalo fitsaboana.
« Ao anatin’ny fialan-tsasatra ny ankizy, ankehitriny, ka fotoana hanararaotana ny fitsaboana ny nifin’izy ireo izao », hoy ny dokotera. Esorina avy hatrany izay nify tena potika tanteraka ka tsy afaka miasa intsony. Ezahina tsaboina kosa izay mbola azo avotana.
By Alpha world at 11 h 11